Thu, Jul 2, 2020 at 11:22am
सरकारलाई जिम्मेवार बन्‍न राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाको आह्‍वान #आहा खबर# बारामा चट्याङ लागेर धान रोपीरहेका चार महिलाको मृत्यु #आहा खबर# ओली निकटका नेताहरु प्रचण्डसँग छलफल गर्न खुमलटारमा #आहा खबर# आजदेखि बालबालिकालाई रोटा भाइरसविरुद्धको खोप दिइँदै #आहा खबर# जुवा खेलिरहेको अवस्थामा २ महिलासहित ६ जना पक्राउ #आहा खबर# कोठाभित्र एउटै पासोमा झुन्डिएको अवस्थामा प्रेमी–प्रेमिका #आहा खबर# गण्डकी प्रदेशमा थप ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि #आहा खबर# कर्णालीमा पनि पुग्यो सलहकाे झुण्ड, उच्च सतर्कता अपनाउने तयारी #आहा खबर# अन्तिम चरणमा पुग्याे अमलेखगञ्‍ज-चितवन पेट्रोलियम पाइप लाइनको सर्भे #आहा खबर# विवाहित महिलाले आफ्नो नागरिकताबाट पतिको थर हटाउने प्रस्ताव #आहा खबर# ललितपुरमा ३ स्वास्थ्यकर्मीसहित थप ७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि #आहा खबर# महानायक राजेश हमालका फ्यानसँग दीपाश्रीले माफी मागिन् #आहा खबर# झण्डै दुई तिहाइका प्रधानमन्त्री दलभित्रै अल्पमतमा #आहा खबर# यस्तो बन्दैछ सिन्धुपाल्चोकमा ‘नेपालको ग्रेटवाल’ #आहा खबर# भारी वर्षाका कारण चीनमा १४ जनाको मृत्यु, ८ बेपत्ता #आहा खबर#
धिरुभाई अम्बानीका जेठा छोरा मुकेश अम्बानी अलिबाबाको संस्थापक भएपछि उनी एशियामै सबैभन्दा धनि व्यक्तिको सूचिमा परे । उनी र उनका परिवारका सदस्य तथा उनको महल प्रायः चर्चामा आइरहन्छ । मुकेश अम्बानीको परिवारको चालचलनको बारेमा धेरैलाई थाहा भइसकेको छ । जहाँ उनकी पत्नी नीता अम्बानी पनि विभिन्न कारणले चर्चामा आइरहन्छिन् । भने उनका परिवारका हरेक सदस्य विभिन्न कारणले चर्चामा नै रहने गर्छन्..
काठमाडौँ, २ असोज । १. मानिसको आँखाले १ करोड फरक रङ्ग छुट्याउन सक्छ । २. आँखा करीब २० लाख भागहरु मिलेर बनेको हुन्छ । ३. आँखाको कोर्निया शरीरको एक मात्र त्यस्तो तन्तु हो जसमा रगत प्रवाह हुँदैन । ४. एउटा आँखाको तौल करीव २८ ग्राम हुन्छ । ५. आँखा खुल्ला राखेर हाछिउ गर्न सम्भव हुँदैन् । ६. जन्मदेखि मृत्युसम्म आँखाको आकार परिवर्तन हुँदैन् । ७. भर्खर जन्मेको..
काठमाडाैं, १ असाेज । तपाइँले पत्रपत्रिका तथा अन्य ठाउँमा घडीकाे विज्ञापन गरेकाे देख्नु भएकै हाेला तर, घडिकाे त्यस विज्ञापनमा देखाइने घडीमा घण्टा र मिनेट सुई १० बजेर १० मिनेट गएको गरी मिलाइएको पनि धेरैलाई थाहा नै हाेला । आखिर विज्ञापनको घडीमा किन १० बजेर १० मिनेट गएको देखाइन्छ त ? यस्ता छन् प्रमुख ५ कारण -१० बजेर १० मिनेटमा घडीका सुईहरु एक सन्तुलित स्थानमा हुन्छन्..
काठमाडौं, ३१ भदौ । काठमाडौंको तारकेश्वर–१० मनमैजुमा ११ वर्षीया बालिका बसभित्रै बलात्कृत भएकी छन् । आइतबार राति मनमैजुस्थित शुभकामना चोकमा भेटिएका दुई बालिकामध्ये एकलाई बा४ख ८२ नम्बरका बसका सहचालकले बसभित्रै बलात्कार गरेका हुन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुले सोमबार बिहान बालिकामाथि जबर्जस्ती करणीमा संलग्न रहेको आरोपमा भोजपुर हचुवागढी गाउँपालिका–३ का एल्जित राईलाई पक्राउ गरेको छ । वृत्तका डीएसपी बालनरसिंह राणाले पीडित बालिकाको..
काठमाडौं, २८ भदाै । मानिसले भाेक लाग्दा खाना खान्छ अथा अन्न खान्छ तर, भारतमा एक अनाैठा मानिस भेटीएका छन् । जसले भाेक लाग्दा खानामा अन्न हाेइन सिसा खान्छन् । तिँ मानिले भोक लागेको समयमा काँचका सिसा खान्छन् । यी मानिसले खानामा चामल, रोटी, फलफूल खाने गरेका छैनन् । भारतीय मिडिया आजतकका अनुसार, उनले आज भन्दा करिब ४५ वर्ष पहिले देखि नै सिसाखाँदै आएका हुन् । भारतको..
काठमाडौँ, २७ भदौ । मानव शरीरका अंगमध्ये ओठ सबैभन्दा संवेदनशील हुन्छ । ओठबारे कैयौँ तथ्य छन्, जुन तपाईं अधिकांशलाई थाहा नहुन सक्छ । -माथिल्लो ओठको संरचनामा आर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स पनि हुन्छन् । पित्तल, बाँस अथवा काठबाट बनेका वाद्ययन्त्र बजाउँदा वा सिटी फुक्दा यिनै मसल्सले संकुचित बनाउँछन् । -शरीरमा नसा समाप्त हुने स्थान संवेदनशील हुन्छन् । ओठमा धेरै नसाको अन्त्य हुन्छ । त्यसैले संवेदनशील..
नयाँ दिल्ली, २६ भदाै । पब्जी खेल्न नदिएकाे भन्दै एक युवकले आफ्नै बाबुको घाँटी रेटेर हत्या गरेका छन् ।भारतको कर्णाटकस्थित बेलगावी जिल्लामा एक २१ वर्षीय युवकले मोबाइल गेम पब्जी खेल्न नदिएका कारण आफ्नै बाबुको घाँटी रेटी हत्या गरेका हुन् । रघुबीर कुम्भर नामका ती युवकलाई पब्जी खेल्ने लत लागेको थियो र त्यसले उनको पढाइमा असर गरिरहेको थियो । बेलगावीका प्रहरी कमिस्नर बीएस लोकेशकुमारले..
काठमाडौं, २६ भदौ । उपचारको बहानामा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा न. ९ का ३९ वर्षीय राजु मगरको पेटमा एक लामा झाँक्रीले प्वाल पारिदिएका छन् । पेट ब्लेडले चिरेर प्वाल पारेपछि दुई महिनादेखि जण्डिसको विरामी परेका मगर जिवन मरणको दोसाँधमा पुगेका छन् धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा न. ३ का गजबहादुर लामाले मोटो रकम लिएर पेट चिरेर छाडेका थिए । जिल्ला अस्पतालमा आमस्मिक कक्षमा उपचारका लागि भर्ना..
एजेन्सी, २५ भदौ भनिन्छ कि विवाह पछि कुनै पनि व्यक्तिको भाग्यमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । पत्नीको भाग्यको पतिको भाग्यमा पनि निकै ठूलो प्रभाव परेको हुन्छ । तर, सबैको हकमा यस्तै हुन्छ भन्ने छैन । कसैकसैको चाहिँ यसले झन् नराम्रो प्रभाव पारेको पनि हुन्छ । यदि कसैको विवाहपछि पनि भाग्य चम्किएको छैन भने यस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ जसले मानिसको जीवनमा ठूलो परिवर्तन..
काठमाडौँ, २४ भदौ । अवैध रूपमा सम्पति कमाएकाले आफ्नो सम्पतिलाई वैध बनाउन घरजग्गामा ठूलो लगानी गर्ने गरेकाले नेपालमा घरजग्गाको मूल्य तीव्र रूपमा बढिरहेको पाइएको छ । कालो धन आर्जन गर्नेहरूले सम्पति शुद्धीकरण गराउनकै लागि घरजग्गामा लगानी गर्ने क्रम बढाइरहेको सम्पति शुद्धीकरण अनुुसन्धान विभागका अधिकारीले बताएका छन् । विभागका अधिकारीका अनुसार उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भागमा कैयांै क्षेत्रफल जग्गा कालो धन आर्जन गरी..
काठमाडौं, २२ भदौ । ऋषि पञ्चमीका दिन नाचगान गरेर साँझ घर फर्कंदै गर्दा धनगढी उपमहानगरपालिका–५ तारानगरकी पार्वती भण्डारी सत्कार चोक पुग्दा लुटिइन्। मोटरसाइकलमा आएका दुईजनाले उनको हातको झोला खोसेर लगे। मानिसको चहलपहलकै बीच अप्रत्यासित रूपमा सो घटना भएको थियो। उनले सहयोगका लागि अरूलाई गुहार्न खोज्दाखोज्दै लुटेर भागिसकेका थिए। लगत्तै उनले प्रहरीलाई घटनाबारे जानकारी गराइन्। तर अहिलेसम्म लुटेर फेला पर्न सकेका छैनन्। गत..
एजेन्सी, २१ भदौ । शहरमा अनावश्यक अफवाह नफैलियोस् र शहरका मानिसहरुले अनावश्यक कुरा काटेर समय बर्बाद नगरुन् भन्नाका लागि फिलिपिन्सको एक शहरले मानिसहरुलाई कुरा काट्नै प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । राजधानी मनिलाबाट २ सय किलोमिटर उत्तरमा रहेको बिनालोनान शहरले त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसका लागि कुरा काट्न प्रतिबन्ध लगाएको हो । त्यहाँ सन् २०१७ यता कुरा काट्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसअनुसार अरु कसैको..
काठमाडौं, २१ भदौ । पछिल्लो समयमा मुलुकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको जालोले गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको पाइएको छ । ओसारपसारको धन्दाका रूपहरू फेरिँदै जान थालेपछि यसले ठूलो चुनौती थपिदिएको हो । यस्ता गतिविधिमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको सक्रियता र निसानामा शिक्षित तथा प्रविधिमा पहुँच राख्ने युवा पुस्ता नै पर्न थालेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार पछिल्लो समय..
विदुर, २० भदौ नुवकोटको विदुर नगरपालिका–५ र बेलकोटगढी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्षले देवीघाटस्थित तादी खोलामा रहेको झोलुङ्गे पुल आफूखुशी बेचेका छन् । विदुर नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष शिवकुमार चित्रकार र बेलकोटगढी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष भोजप्रसाद पुडासैनीमाथि देवीघाटस्थित तादी खोलामा रहेको झोलुङ्गे पुल कबाडीमा बिक्री गरेको आरोप लगाइएको छ । विसं २०२१ मा निर्माण भएको सो पुल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संरक्षण गर्नुको साटो उल्टै बेच्दा..
खोेटाङ, २० भदौ । श्रीमानले प्रहार गरेको खुकुरीबाट खोटाङमा श्रीमतीको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्माका सीताराम राईले ३० वर्षीया श्रीमती देविका राईलाई गए राति टाउकोमा खुकुरी प्रहार गर्दा उनको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो । श्रीमतीको हत्या गरेलगत्तै स्थानीयवासीले दिएको जानकारीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दिक्तेलबाट गएको प्रहरी टोलीले सीतारामलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रहरी नायब..
काठमाडौं, २० भदौ । भारतको आन्द्र प्रदेशको गुटुर जिल्लाकी ७३ बर्षीया एक महिलाले जुम्ल्याहा बालिकाको जन्मदिएपछि संसार भर नयां तरंग उत्पन्न भएको छ । ७३ बर्षीया यरामती मंगायम्माले बुधबार अस्पतालमा दुई बच्चालाई सिजरिड गरेर सकुसल जन्मदिएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । डाक्टर उमा शंकरले अपरेशन गरी दुवै बालिकालाई सकुशल जन्मदिन सफल भएको बीबीसीले जनाएको छ । बच्चाको अवस्था सामान्य रहेपनि अझै २१..
मंगलवार, भाद्र १७, २०७६ साल
सिञ्जा, १७ भदौ । जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिकाका माथिल्लो क्षेत्रमा भालुको आतङ्क बढेपछि किसान चिन्तित भएका छन् । बारीमा लगाइएको मकै रातको समयमा भालुले खाएर सखाप पार्न थालेपछि रातभर जाग्राम बस्नुपरेको किसान बताउँछन् । गाउँका किसान साँझपर्ने बित्तिकै होहल्ला गर्दै कुकुरसहित भालु लखेट्न थालेका वडा नं ६ भाडगाउँका जयलाल रावतले बताउनुभयो । सिञ्जाको जाला, घोडीलेख, तल्लो जालालगायतका क्षेत्रमा भालुले मकै खाने गरेको छ..
काठमाडौँ, १७ भदौ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले २५ वर्षअघि विभिन्न व्यक्तिद्वारा अतिक्रमित भनी औंल्याएको १८ सय रोपनी सरकारी जग्गा अझैसम्म सरकारले खोजेको छैन । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको गुनासो बढेपछि ०४९ पुस १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूर्वभूमिसुधार सचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेका थिए । आयोगले दुई वर्ष लगाएर १३..
शुक्रबार, भाद्र १३, २०७६ साल
सप्तरी, १३ भदौ हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका–३ स्थित गिदखोरामा आज एक अजिङ्गर फेला परेको छ । खाडलमा माछा मार्ने क्रममा स्थानीयवासीले सात फिट लामो १० किलो तौल भएको अजिङ्गर फेला पारेपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिई भारदहस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा बुझाएका थिए । उक्त अजिङ्गर रुपनगरस्थित इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत उमेश यादवको टोलीलाई बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक मनोजकुमार यादवले बताउनुभयो ।..
बुधबार, भाद्र ११, २०७६ साल
काठमाडौं, ११ भदौ । हामीले नारीलाई दुर्गा अर्थात शक्ति, सरस्वती अर्थात कला, लक्ष्मी अर्थात समृद्धिको रुपमा पूज्छौं । तर, कस्तो नारी ? प्रश्न उठ्न सक्छ । नारी भन्नसाथ नारी देहले मात्र पुग्दैन । उसको स्वभाव, प्रवृत्ति, चालचलन, सोंच आदि थुप्रै कुराले एउटा नारीलाई वास्तवमै कोमल, सहृदयी, विवेकशिल बनाउने हो । अतः हाम्रो धर्मशास्त्रले नारी कस्तो हुनुपर्छ ? वा कस्ता नारीले घरमा सुख-समृद्धि..
काठमाडौँ, ११ भदौ । सहाराविहीन बालबालिका संरक्षणको जिम्मा पाएको बालमन्दिरकै उच्चपदस्थ अधिकारीले निःसन्तान दम्पतीलाई साढे पाँच लाख रुपैयाँमा अर्कैको शिशु बेचिदिए । कानुनी उल्झनमा फस्ने अवस्था आएपछि दम्पतीको भावनामा खेलाँची गर्दै जबर्जस्ती फिर्ता लिए । विवाह भएको १५ वर्षसम्म पनि सन्तान भएन । सन्तान भइहाल्छ कि भनेर अनेकन अस्पताल धाए, अनेकन मन्दिर भाके । यो दौडधुप र छटपटीले नुवाकोटका एक दम्पती गलिसकेका..
काठमाडौँ, १० भदौ शास्त्रमा उल्लेख गरिए अनुसार शरीका अंगहरुको आकार हेरेकै भरमा उसको भाग्यका विषयमा थाहा पाउन सकिन्छ । हात, कान, खुट्टाका औंला, हस्त रेखा आदि हेरेर फलादेश गरिएझै मानिसहरुको ओठ हेरेर पनि उसको भाग्यका विषयमा थाहा पाउन सकिन्छ । दुबै ओठ समान र सुन्दर हुने व्यक्ति सत्यप्रिय, सुशील तथा सज्जन वृत्तिको हुने गर्दछ । उसले कोमल शब्दले भरिएको मिठो वाणीको प्रयोग..
सोमबार, भाद्र ९, २०७६ साल
काठमाडौँ, ९ भदौ कुनै समय मानिसहरुलाई चेकोस्लोभाकिया (Czechoslovakia) जस्ता अंग्रेजी शव्द उच्चारण गर्न समेत असजिलो हुनथ्यो । तर कुनै एउटा अंग्रेजी शव्द उच्चारण गर्नका लागि साढे ३ घण्टा लाग्यो भने के होला ? हो, यो दुनियाँमा एउटा यस्तो अंग्रेजी शब्द छ जसलाई पढेर सिध्याउन साढे ३ घण्टा लागछ। एउटा मात्र शब्द पढ्नका लागि साढे ३ घण्टा लाग्ने कुरा पत्यार नलाग्न सक्दछ । तर..
काठमाडौँ, ९ भदौ । जाजरकोट भेरी नगरपालिका–१ का जनप्रतिनिधिले गरिबका लागि वितरण गर्न खरिद गरेका कुखुरा आफू र आफू निकटका व्यक्तिलाई दिएका छन्। विपन्न परिवारका युवालाई कुखुरा पालन व्यवसायमा लगाइ आय–आर्जन गर्न खरिद गरेका कुखुरा वडा पालिकाका पदाधिकारी र उनीहरूका नजिकका नातेदारले लिएका छन्। गत आर्थिक वर्षको आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भेरी नगरपालिकाको कृषि शाखाबाट ३ लाख र पशु विकास शाखाबाट ३..
काठमाडौँ, ८ भदौ विश्वको सबभन्दा ठूलो अमेजोन जङ्गलमा एक सातादेखि भएको आगलागीका कारण दक्षिण ब्राजिलका सहर धुवाँले ढाकिएका छन् । आगलागी हालसम्म नियन्त्रणमा लिन सकिएको छैन । दक्षिणपश्चिम ब्राजिल र दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा फैलिएको यस जङ्गलबाटै संसारभरका जीवात्माका लागि २० प्रतिशत अक्सिजन उत्पादन गर्छ । विश्वको सबभन्दा ठूलो जैवीक विविधता तथा सबभन्दा ठूलो नदी रहेको यस जङ्गलका डरलाग्दा र अनौठा ६ तथ्य यस्ता..
काठमाडौँ, ८ भदौ । मानव जिवनमा सेक्स आवस्यक कुरा हो । जुन श्रीमान र श्रीमतीका बिचमा हुने गर्छ । तर संसारमा यस्तो ठाउँ भेटिएको छ । जहाँ बुढेसकालमा जङ्गलमै सम्भोग गर्नेहरु भेटिएका छन् , त्यो पनि सामूहिक । ६२ देखि ८५ उमेरका छ जना व्यक्तिहरु यौन गतिविधि गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका छन् । जसमध्ये एक महिलाको उमेर ८५ वर्ष छ ।..
काठमाडौँ, ८ भदौ । अन्तरिक्षबाट पृथ्वीमा बदमासी गर्न सकिन्छ ? अमेरिकी अन्तरिक्षयात्री एन म्याकक्लेन उहींबाट उनका पूर्वपतिको बैंक खाता चलाएको अभियोग खेपिरहेकी छन्। अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था (नासा) ले यसको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। र, उनले यसलाई स्वीकारेकी पनि छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रबाट पूर्वपतिको बैंक खाता हेरेको तर कुनै गलत नगरेको म्याकक्लेनले न्युयोर्क टाइम्सलाई बताएकी छन्। पूर्वपति समर वोर्डेनले फेडेरल ट्रेड कमिसनमा यसबारे..
चितवन, ७ भदाै । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका न्युज २४ का रवि लामिछानेलाई म्याद थप गरी प्रहरीको हिरासतमै राखिएकाे छ । शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि रेकर्ड गरेको भनिएको भिडियोमा उनले रविसहितका तीन जनाका कारण आफू आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरेपछि प्ररहीले थप अनुसन्धानको लागि भन्दै अदालतमा १० दिनको समय मागेको थियो । तर अदालते पाँच दिनको..
काठमाडौँ, ७ भदौ । कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका ९ का जयबहादुर विकले छिमेकीमाझ अनौठो प्रस्ताव राखे। प्रस्ताव थियो– अभिभावकले सुरुवाती चरणमा केही रकम उपलब्ध गराए कक्षा १० सम्म काठमाडौंमा निःशुल्क अंग्रेजी माध्यममा पढाइदिने। साँझबिहान घरपरिवार चलाउन समेत धौधौ भएका अभिभावकका लागि उक्त प्रस्ताव आकर्षक थियो। आफ्नै चिनेजानेका छिमेकी जयबहादुरबाट राम्रो खालको प्रस्ताव आएपछि हिमा गाउँपालिका ७ का रामबहादुर बुढा केही पैसा तिरेरै..
काठमाडौं, ६ भदौ । असोज ३ मा आयोजना हुने राष्ट्रिय दिवसमा प्रमुख अतिथिका रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई निम्त्याइएको छ । संविधान जारी भएको दिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा भव्य बनाउने सरकारको तयारी छ। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग बुधबार बालुवाटारमा भएको करिब एक घण्टा लामो एकान्त वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीलाई राष्ट्रिय दिवसको प्रमुख अतिथि बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । जयशंकरले नेपाली प्रधानमन्त्रीको निम्ता भारतीय..
Results 601: You are at page3of 21